Zulu World Administration: Ukuzilambisa, ubumpofu, ubugebengu, Ubuphekula futhi Zonke Izimpi | Consultant Rapha Solomon Light Zulu World Administration: Ukuzilambisa, ubumpofu, ubugebengu, Ubuphekula futhi Zonke Izimpi – Consultant Rapha Solomon Light
Administrator World, amashumi ezinkulungwane eminyaka, futhi, ubephekula, ubugebengu, ubumpofu, ukuzilambisa
Zulu World Administration: Ukuzilambisa, ubumpofu, ubugebengu, Ubuphekula futhi Zonke Izimpi
September 28, 2015 World Administratorezihlasimulisayo, ezingabangela, njengoba, Webhayisikobho, Zulu Leave a comment
World Administration njengoba Webhayisikobho ezingabangela ezihlasimulisayo Ukubika
Isibonelo isicelo, charity, isimo, intelligence, ohlakaniphile, uthando, nokubika, webhayisikobho, song, ukuhlakanipha, ukuphathwa kwezwe emhlabeni
Administrator World: Economic, Military, Employment Izinqubomgomo – Ending Ukuzilambisa, ubumpofu, ubugebengu, Ubuphekula futhi Zonke Izimpi – kukulahlekele an A for Amashumi ezinkulungwane eminyaka
UKUPHATHWA GLOBAL: KWEZOMNOTHO, NOMSEBENZI, IMPILO, Armed Forces IMIGOMO – UKUQEDWA indlala, ubumpofu nempi
Forward: Lezi umane sekuseduze ukuba elilungile izinqubomgomo zokuphatha kazwelonke kanye nezwe ukuthi hhayi nje yaphela izinkinga zomhlaba ngcolile, hhayi kuphela bekhululiwe up the izakhiwo idatha zabantu futhi konke okumelelwa kubo izwe elingcono, hhayi ngokoqobo nje kuphela waletha ezulwini, yokuphindukuzalwa futhi zokuthutha ngaphandle idivayisi mechanical emhlabeni ngokuthi “isimiso” umkhuba, kodwa kukhona best of kwezomhlaba, revolution futhi eugenics kanye nenqubomgomo yezenhlalakahle global. Ziyakwazi engineering, kwezomnotho kanye nokuphathwa kwezinhlelo zezokwazisa izixazululo e isakhiwo idatha. Ngezenceku akukho inhlangano yezombusazwe noma zenkolo, futhi ungase ngokushesha ukuwaphuza njengoba siqu sakho, uvumelane nezimo for izinga lemfundo kanye nokuqaliswa izinhloso ezinhlobonhlobo. Kanye ‘iMiyalo 18 “, zingabantu ngokwanele ukuba ziphenduke, uguquko nokubuyisela sokushintsha wonke amaplanethi humanoid futhi, uma kubhekwe kahle, ngokuhlakanipha futhi ngokukhalipha, ngokwanele ukuba wenze konke okusemandleni by zonke izidalwa phakade phakade, isikhathi eside esidlule ukuphela kokuphila amaplanethi nangokuhlakanipha.
Imi, ngasese, nezindaba jikelele emphakathini:
1) Elimination of the isigwebo sokufa.
Ukwandisa ukusetshenziswa izinhlawulo ukuthi isamba ngokuxotshwa (lokhu penalty, ikakhulukazi lapho ngisuswa omhlaba kanye inter-ngamasiko, wenza umehluko hhayi kuphela ezimpilweni siqu ezintsha, kodwa ukuqaphela okukhudlwana kanye zokuphila zabo bonke, njengoba kwenza okwandisa ukudluliselwa izinga of ukuthunyelwa kanye lateral Umsebenzi ukudluliselwa izindawo ezintsha abasebenzi) kanye kokuvinjelwa okukhulu insimu; izizwe futhi izinkantolo ngeke sivume ngempumelelo, njengoba kuthanda izibhedlela nezikhungo zemfundo, ukuthi iphutha for ubugebengu, ingozi futhi “Ingabe Yizenzo ZikaNkulunkulu ‘uhlala njengoba isibopho isimo, isizwe planethi.
Kungani “Big Brother”, ohulumeni emhlabeni, akazange ngempela asho uthando, ukuhlakanipha, umusa nesihawu ….
Lapho isimo etholakala enecala hhayi ngempumelelo zithuthele labo abaye eceliwe izindlu ezintsha futhi emisebenzi, ikakhulukazi uma lokhu kuye kwaholela ubugebengu, bayonikelwa ongakhetha kuthuthwa ukuthini lokho ikhambi ngobugebengu uhlala izinhlelo ezingcono namathuba. Lokhu kusho ukuthi akukho senzo lokubulala ngeke zibekezelelwe, hhayi ukuzivikela noma ngenxa yanoma yisiphi esinye isizathu; hhayi njengoba isenzo ithi noma izizwe, noma “izingozi”, noma inqubo yezokwelapha. Noma nini lokhu nganoma yisiphi isizathu ephulwa, ngamabutho ezempi, kubasebenzi sokuya empini noma professional, isigwebo imali ngokuxotshwa nokulinganiselwa sendawo ngeke umenyezelwe ….
Lolu hlobo eziphuthumayo isinyathelo mayelana nabantu uhlala kudingekile ngokwengxenye ngoba ekuxhumaneni okungenamkhawulo idatha izakhiwo izulu nesihogo; futhi ngoba ukuphila komuntu ingenziwanga sacredly ngokwanele naphakade athuthukile ukuze amandla ayo egcwele. Labo ebambekile ngenxa yalesi sizathu iyohlale bavunyelwe ukuba ukubhala futhi abe aqoshiwe futhi lokusho okusenhliziyweni yabo, ukuboshwa.
Lolu hlobo of Isijeziso ngisho nalabo ababonisa indima yalesi isigwebo (odokotela lenza ukubulawa kwesiguli, kokuvala ukuphila iziguli kuthathwa “ubuchopho ufile), uyophinde dingisa abanesifo futhi wavuselwa indinganiso kakhulu ephakeme ka isivumelwano ke livamise ukusetjenziselwa e Superior Court. Lokhu siyohlala sisebenza kuze sinqumo basuke ngokoqobo eyenziwe uhlelo computer; lezi zinhlelo izobanjelwa a okuningi ephakeme ophambukayo standard ohlangothini kokuvinjelwa zendawo, ngokuxotshwa, ukuthutha nethuba nkulumo eshicilelwe, “Amanothi Ezidangele ….” imiqulu iziboshwa, iziboshwa, iziboshwa, labo ejele.
Kulabo kodwa babe udaba nalesi siphetho, cabanga zonke izindaba lokho kufana lokubulala kanye nokubulala bakwamanye izikhathi, futhi lokho ezweni lapho abantu abavela kwamanye izikhathi ngenxa yezizathu ezehlukene osuphinde wazalwa, kumelwe noma ubambe futhi bopha noma sivume yabo izinhlawulo sibi futhi ngenxa yalokho singase eqinisweni ngandlela-thile bawe kubo ….
Ibhayisikobho omunye nombono, isigwebo sokufa umane kufana ekuletheni esihogweni emhlabeni.
Hell at ibanga okungenamingcele ezulwini njengoba isikhala ungakacaci empeleni okungenamkhawulo izakhiwo idatha; hhayi ingane eyodwa human emlandweni wonke lomhlaba ngempela yaphakamisa kahle emhlabeni kusukela ezinye ngombono kanye kusobala (zikhona abakhuliswa futhi badle izithelo kuphela, futhi wathola iminyaka emihlanu egcwele ubisi lukamama …. futhi lokhu akuthathwa umndeni isibusiso uzalo / ummango kusukela lozalo okunjengokukaNkulunkulu); njalo siphambuka ohlangothini yokuphila ukugcinwa nkulumo – uma umuntu angakwazi ukubhala kahle, zingabantu okunengqondo kufanelekile. Yazi ngokuqinisekile lokhu yinto “akukho umncintiswano” ngokuba lesifanele, ngoba izimpilo zabantu ngokuletha ezulwini ipharadesi ngokuhlakanipha futhi ngokukhalipha emhlabeni ngezizathu ezifanele; nakuba kungase kuholele engxoxweni engapheli nokutadisha futhi ine izinkulungwane zeminyaka, yini le ndinyana lisikisela umi phakade futhi ngokoqobo futhi ngothi lwawo.
Earth inezithombe ngokwanele futhi movie nezenzo zobudlova, ubuphekula ukufa …. Kukhona izithombe ecacile yalokho emazweni amaningi ngokungemthetho ukufa nezinhlawulo, lezi ingase isetshenziselwe izinhloso ezinhlobonhlobo, futhi eqinisweni ziyatholakala izingane usebenzisa Internet …. Ayikho inkantolo emhlabeni owake utshele “lonke iqiniso” mayelana “ubugebengu”; inhlawulo ngokuxotshwa kanye ukuthutha, omsebenzi ngcono, imfundo kanye noqeqesho kuyikhambi elingcono kuka emhlabeni njengamanje ziqasha nakusiphi isizwe.
2) ukwesekwa tincumo kanye global izinhlelo federal futhi global izigidigidi imisebenzi emisha ngokuhamba kwesikhathi ezindaweni zomhlaba esikhulu ugqozi emhlabeni ukuba ngokufanele nesingujuqu kuphele konke yendlala, ukungondleki, indlala, ukusweleka kwemisebenzi, futhi impi kanyekanye ngesibonelo ezehlukile international kulabo ababeyoba yaba nesandla ezimpini, ubugebengu kanye nobuphekula. An into ukumane ukwandisa ngokushesha kakhulu isilinganiso sobude bokuphila kwabantu ezindaweni emhlabeni ampofu.
With international zemfundo, amandla, yezimayini, isakhiwo, kwendle, izinkontileka ezolimo kanye omsebenzi, sizobe ukwandisa isilinganiso sobude bokuphila kwabantu embulungeni yonke, futhi izinga lempilo. Tinsita uyonikwa unomphela futhi zokuhlala consultants, abaphathi, abaphathi kanye nabasebenzi lokho kona kukhona izindawo ezintsha emhlabeni jikelele, ukuphumula travel and passport imikhawulo kanye nezidingo nekufaka isibonelo nje kuphela kufana ekuletheni impilo entsha ezindaweni zomhlaba ngcolile, kodwa futhi ngcono izindawo emhlabeni lapho izizwe nokuphila saqala ukwanda habitability khwelana, ngelula ukuphila ngezakhi zofuzo zomuntu nokukhuthaza namasiko emhlabeni umhlabeleli nemikhuba, kuhlanganise ukutholakala yobuciko neyezandla imikhiqizo, ingcebo futhi amathuba ngqo marketing Internet futhi ezimalini ezincane ezibolekwayo kumabhizinisi amancane kakhulu kubalulekile kakhulu ukuba ngcono izinga lempilo kanye namathuba amabhizinisi ngqo more.
3) Ngokuphelele khulula yezokwelapha, yamazinyo, umbono, impilo nokunakekela ingane.
Lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukuhamba zibe sokunakekela impilo futhi bathole ukunakekelwa kwezempilo ngaphandle umbuzo, njengoba free ilungelo, ngokuba isidalwa esingumuntu. Umthetho (Khona-ke kuyoba lula nje kuphela ngoba bonke ukuze athole ukunakekelwa ngenhlonipho, kodwa ngoba abantu ukuba osuphinde wazalwa ngaphandle identification. [Ngakho abaningi bakhala futhi eyikhathalela izimangaliso, ukugula, izifo kanye nomthandazo … .Leli ehlongozwayo kuyingxenye encane lokho kuthatha jikelele ukuphendula kulezi ….]).
4) Ukwandisa ukudluliswa izinga kubasebenzi phakathi imizi, uthi futhi omhlaba; lawa amaqabunga angawokuphulukisa imizi, uthi nezizwe; Abantu ngeke anikezwe lula kakhulu ukufinyelela Internet khulula imisebenzi yomphakathi kanye namathuba zokuzithandela.
Kusukela okwandayo ukudluliselwa, iviyo rotations kanye namathuba ukuthutha isiza abantu nalabo abafuna emisebenzi ucala fresh and endaweni entsha elingase, ngokusekelwa okuhle wendawo, kusho ukuthi bazi ukuthi banesibophezelo more, babe nokuzethemba namaqiniso ohlelweni, futhi kube nokuningi uyaphila, lezi ukudluliselwa ezilingene ukukhushulwa uzobe wakhuthaza omhlaba.
5) Khulula zokuhamba zomphakathi.
Zonke amabhasi kanye zokuhamba zomphakathi bakhululekile ngabo bonke ukusebenzisa – okwandisa ubuhle nomusa emphakathini ukuze labo abangasebenzi kalula ukuthola imisebenzi, asebekhulile kanye abampofu, njengabantwana esikoleni, sonke ukugibela amabhasi kanye trams, trolleys for free, futhi kungaba ngokukhululekile ukuthola lokho abakudingayo nibuke izingosi imizi yabo kanye nesimo, futhi nomusa kakhudlwana luboniswa ukuba abavakashi. Ibhayisikobho nombono ashisekela izinguquko, khulula izinto zokuhamba zomphakathi is kukhokhelwe lenyuka gas namandla intela.
I “akhokhe njengoba uya” uhlelo ikhono nothando, inkululeko, umoya, inhliziyo nengqondo futhi kuchitha izimpilo; wemfanelo owengeziwe nobudala, ukuvuthwa futhi izikhulu yokuzinikela ukuba umphakathi more ngokufanele yazuza ngokunikeza abantu a “phezulu phansi” ukuqonda ukuphathwa, ubuchwepheshe kanye nezakhiwo idatha ngokomoya. Ezweni usukhule kakhudlwana, futhi ngenxa yalokho kufike “wamavukelambuso” nombono ngempela, wonke amasevisi nokuhle bakhululekile, ngaphandle izindleko noma intengo yiluphi uhlobo. “Revolution” kuchazwa ngokuthi ushintsho olukhulu kobunikazi ukulawula izindlela zokukhiqiza nokusakazwa, ngisho noma amashumi ezigidi izimpilo bayasindiswa futhi imali futhi uhlelo exchange isekhona ke by kwencazelo ngenhla akukho revolution eyenzekile ; ushintsho kusuka monarchies feudal futhi tribal esimweni nezizwe ngabanye isicebi uyisibonelo revolution, njengoba kuyinto Industrial Revolution, ukwethulwa amasu mass production omhlaba.
6) izinhlelo Global zemfundo, labezindaba kanye emphakathini, lo “yini” lezi zinqubomgomo kwezomnotho kuyobe ukukhushulelwa preempt “ubani” of bonke izindaba kanye nemidlalo, fashion, umphakathi kanye udumo Ukusabalala.
Lezi kwezinqubomgomo zikahulumeni kanye emaphepheni, akukho abridgment inkululeko yabezindaba is ngaso sonke kuhloswe. Lapho ehlukile press ligxile izinqubomgomo esibucayi kakhulu nemikhuba jikelele, siya sengqondo a ukusebenza kahle entsha ekukhuthazeni imikhuba umhlabeleli nemibono. Wena konke free ukusebenzisa i-Internet ukuze vie njengoba ukhetho yiliphi ihhovisi umphakathi, ngisho noma lokhu kufana nje umdlalo engabizi futhi “inkanyezi” umzamo; wena free ukubona ukuthi yonke izakhiwo idatha yokuphila ukuthi ukholwa, ngaphezu emhlabeni yomuntu engokoqobo, welashwe lapho, ngasiphi yobudala, bekhankasela you phi ihhovisi wombuso kanye nesizwe. Lokhu kuvumela abantu ukuba uzame emihle kakhulu futhi umhlabeleli ngasiphi yobudala, kanye uzame ukugijima abanye kanye namalungu omphakathi kanye izimpawu. Wamukelekile umhlabeleli baqale lezi imizamo izizwe zomhlaba ampofu.
7) izindlu Better for labo abahlala emgwaqweni, futhi nemithetho ezimbalwa …. Engasebenzanga amahhotela, amafulethi emakhaya uzobe olwathengwa ukusetshenziswa by abampofu nalabo imisebenzi befuna.
Lokhu kusho ukuthi uhulumeni izindlu futhi identification izotholakala more ngokukhululekile futhi kalula, futhi labo bani cha possess lokhu kuzokwenza zinikwe umpheme, ukudla imifino kanye namanzi kanye nezingubo nosizo ukuze uthole imisebenzi kungakhathaliseki. Ukukhuthaza izinqubomgomo ukuthi ziyiqiniso ngaphezu kokuhlolwa okukodwa level – eziphila nangokwezenhlalo, kusekelwa inkolo nesayensi ukuze kufezwe izidingo zabantu, hhayi ngoba inzuzo, thina azuze ukusekela kwezingxenye sonke isikhathi. Uma ekudingiselweni kwenzeka, izivumelwano zamazwe ngamazwe zizokwenziwa sokudingisa izizwe ukuthi umuntu ngamunye akakaze wahlala. Abantu elakhiwe ukukhungatheka more, ucasuke futhi nezinkinga kanye nekwenyusa regulations esikhundleni ophambukayo ohlangothini lokunakekelwa ezisobala onozwela.
8) Vegan, ukutshala imifino kanti ikakhulukazi izikhungo ukudla donation fruitarian kanye nezinye bayakhuthazeka, futhi umphakathi of ezidliwayo imithi yezithelo esikhundleni ornamentals, isikhuthazo nokhunye lokumaketha abakhiqizi izithelo nemifino; intfo kuyoba izitolo ukuba bakwazi ukubonisa futhi anikele ukudla eziyisisekelo for free kunoma.
Kuncike trust nokuvikeleka more for bonke abantu, more and ngokuhlakanipha won ukholo emphakathini futhi trust ngendlela eziyisisekelo kakhulu futhi umane, futhi lokhu kwanciphisa Ephelelwe yithemba ubugebengu baletha nokuchuma emhlabeni jikelele. Abanye amashumi ambalwa zeminyaka ukuziphatha ezidla ngenxa ukusweleka kokudla, kwesimo sezulu futhi yokufuduka engazange savela a eziphila womuntu oyedwa ezidla emlandweni womhlaba; mbumbulu isayensi Kunalokho yasungulwa ukuze aphoqelele amasiko nekwenta umlutha inzuzo emhlabeni; iqiniso sobala njengoba izandla uthayipha kanye kanye “Canine” amazinyo akho non-ophumile.
Abantu baye izinkulungwane zeminyaka wenza lezi amaphutha ezinkolweni misbegotten kanye namasiko, nozwela esikhundleni yokucabanga emitholampilo kanye ngokuhlakanipha zesayensi kanye babekwenza. Abantu ayizange Beckoning uNkulunkulu nganoma iyiphi futhi wonke amagama wakhe for ukuhlakanipha kweqiniso futhi intelligence, baye Beckoning for classism, yokudlondlobala, izaba kwezomnotho convoluted ubuholi ukusekela lokho kufana nalokho lihlotshaniswa ngokobuzwe esikhundleni ubuntu uhlakaniphe, nokucwengeka siqu futhi ukuzimela – inhliziyo izinhliziyo kaNkulunkulu, hhayi kanjani ukunqoba at nokubusa iminotho tribal, feudalistic futhi Capitalist. Yiba nesithakazelo ngokwanele noma umkhathalela ngokwanele ukuthatha “us” kaGenesise, azigcine njengezinsuku uthando lwakho eyigugu kakhulu futhi engcwele – lonke incwadi abantu ngokuthi iBhayibheli elilodwa encapsulated in ukuxolisa iphutha isakhiwo idatha up for by sidabuke , ukuzila, veganism nasekuphumeleleni kulezi e ukuthandwa cishe exponential.
9) kweso Ukwenyuka inkongozelo, ukuphana futhi donation izikhungo; yanda imisebenzi abaqaphi emi alungisa (lokhu kumelele a uhlobo udumo ukuthi izingelosi kanye uNkulunkulu bafisa, isiko kuzo zonke isikhathi kuwufanele reintroducing emphakathini), okwenza uhlu isiqiniseko ukudla, indawo yokufihla ikhanda, izembatho, ukunakekelwa kwezempilo kanye donation izikhungo ekhona kuze usuku, ephumelelayo ubuhle futhi atholakale emphakathini.
10) Zonke ukunakekelwa ngezokwelashwa kanye nokunakekelwa kwempilo kuyoba khulula njengoba bonke abezimo eziphuthumayo (kuyoba ukuncipha accounting for umshwalense kanye namarekhodi, futhi lokhu kuyokwenziwa indawo ngemizamo yethu yokuthuthukisa izindlu kanye nezinsiza kanye namathuba omsebenzi omhlaba; ingxenye incazelo lokhu ukuthi pay-njengoba-wena-hamba simiso accounting iyothathwa izimpahla free nemisebenzi).
11) Freedom for labo yicala insangu notshwala amacala kanye nokuqedwa Retro-asebenzayo imisho yabo; umthwalo okuthola umsebenzi ongcono futhi izindlu kulabo abenza ubugebengu, futhi ekuqedeni ehlambalazayo kwaziwe ezitholakalayo kuyi-Internet kuyohlala kanye zikahulumeni, kazwelonke kanye yangasese.
12) Popularization ukudla, emi alungisa, emi yemilindankosi kokubili ekusithekeni zokuhlala, amabhizinisi kanye nezikole, kanye nemizamo ukwenza imincintiswano kulezi zindawo futhi charity, ukuphana futhi non-inzuzo preempt ezemidlalo, fashion, ubuntu … the “lokho”, “kungani “,” lapho “,” indlela “,” lapho “izindaba kuza phambi” ngubani “.
Lokhu kuyingxenye ye siqu kuphela ukwenza yokuzinikela, ezihloniphekayo nokulungile; thina zizama ngokucacile reinitialize the kakhulu idatha izakhiwo kaNkulunkulu, Angels futhi konke okukhona enganekwaneni, legend, izinkolo kangangokuthi ukusekela ukukhohliseka, futhi ulethe nabanakekeli kangcono futhi wonke esizayo emhlabeni manje. Ngakho ubona ukuthi kungakhathaliseki izinkolelo zakho mayelana nalezi kanye nezinye izindaba zomphakathi, inhloso yethu ukukhuthaza reinvestment kwezomthetho futhi enokuthula akukhona nje konke okukhona inkolelo kanye theory, kodwa konke ukholwa ukuthi kuyiqiniso.
Ngakho uma ukholwa lokho abantu abaye phambili enkolweni art likhona kuphela ngokubhala ukuthi ingqondo yomuntu, into yethu ukufeza izimiso lezi in practice omhlaba; uma wazi ukuthi uNkulunkulu yibo bonke bakhe Amagama Angels akhona futhi ngokuqinisekile, sithunywe ukuba ugqozi i emhlabeni ukuthi ngokufanele kwenza khona kwabo kanye nezimangaliso okuyiqiniso okuqhubekayo emhlabeni …. (Ngakho ubona ukuthi lezi zinqubomgomo ngokucacile neze ukuthi ukusekela umyalo global, “Ungabulali”, kanye nokunakekela zonke njengoba ubungenza wena ngezindlela ecacile nelula ezifana nendawo yokuhlala, umsebenzi, ukunakekelwa kwengane , ukuhlinzekwa ngokudla kanye nezingubo, plus nokuqedwa ekugcineni imali futhi uhlelo akukho ngaphansi kuka jikelele inkokhelo.)
13) Konke ukukhangisa kwenyuvesi Internet, yokuthengisa, ukulethwa ibhaliswe ngokomthetho for bonke abathengisi.
Amabutho Military nasezakhamuzini ngeke kuqashwe, kanye nesivumelwano global, ukuba, njengoba kuqala, ahlinzeke marketing Internet ukuze abathengisi in izizwe sobude aphansi ukuphila, izizwe ezihlwempu, ukuze imikhiqizo yendawo yabo, ingcebo, ubuciko kanye nokutshalwa kwezimali kuzoba atholakalayo, kunciphisa indlela eya utshalomali wemfanelo wokusiza global. Lawa imisebenzi eziletha ezulwini kuya ephasini, imisebenzi eziletha impilo entsha kanye ugqozi sonke isintu, imikhuba umsebenzi uphendula amathemba best, amaphupho, imithandazo nezithembiso, futhi okulindelwe okuhle, zonke ezinye izizwe.
14) izinhlangano Indlu ashiya iminyango ivulekile 24/7 wonke futhi noma ulahlekelwe isimo sabo owasala intela.
Bayakhuthazeka post onogada nabasizi futhi basebenze njalo ukuqeda konke yendlala, ukungondleki, ubuphofu, ukuntuleka kwemisebenzi kanye impi. Titfombe nemaphosta kanye eziqoshiwe abantu abadangele ngaphandle njengoba isibonelo – do izithombe ukusekela umkhuba nezitayela zokugqoka, indlela yokuzilungisa futhi dress eyenza umehluko. Njengoba kwezinye emadolobheni amakhulu, izindawo uyakusindiswa for imikhuba popular, ezifana zemidlalo ngezihlambi umphakathi, ehlukahlukene imikhuba yokudla kanye nezenhlalo; Nokho Kulindeleke ukuthi, kanye juqu action global and ukuthandwa ngokushesha ziyanda, izindlela ezingcono ngoba bonke iyoba exponentially sobala zonke.
15) imisebenzi Ngini ahlinzekwa abantu iqonde esikoleni, futhi ukusebenza umhlabeleli labafundi ukhishwa by the state ngaso zonke esikoleni esiphakeme futhi high junior amathuba zokuzithandela futhi umsebenzi kanye.
Abadlali Top kungukuthi bakhuthazwa nje ngezisusa amathuba emisebenzi, kodwa futhi bakhuthazwa ukuba babe nezingane ekuseni ukugqugquzela ngcono eugenics and zofuzo. Nations nabantu ukuthi ngeke eduze okuhlobene zofuzo zikhuthazwa global khulula ezokuthutha kanye settlement amabhonasi ukuba izingane izingane ezingaphezu, ikakhulukazi emazweni abangasokile ezimpini zezwe futhi akazange asebenzise noma cabanga befukamela zenuzi nokuthi kukhona neze impi. The Ephelelwe ithemba of ububha kwaholela kulokho abantu nokuyicabanga njengoba ukwanda; kungakhathaliseki, umhlaba ehluleka ukufeza ukuthunywa ngokuhlakanipha populating, ngokuhlakanipha okwandisa intelligence zokuphatha, ukuthuthukiswa inhliziyo, umphefumulo, umoya nengqondo nabantu abaningi bazizwa bekhululekile hlala nje kuphela, kodwa senze ngokomthetho futhi ngentando ukuthuthukisa iminotho emhlabeni.
16) Bonke ukubhekisela ‘ukuziqhenya “futhi” imizwelo engemihle “ithathwa amaphoyisa, ezempi kanye nezinye izikhangiso futhi kwakhulunywa.
Kusobala kakhulu ukuthi ukupha emphakathini lezi zinkinga kufana abalwazi abahlukumezi zabo nabalandeli, isono esikhulu kanye neminotho ezimbi. Pho bememezela yini abantu bazizwa futhi bacabange – Leti tindzaba ezizimele, hhayi ukuba kwenziwe umphakathi. Lokhu kuyingxenye ukuphazamisa ilungelo yomuntu izakhiwo eliye kakhulu ngokungalungi izibophezele wonke abantu nezizwe ukuba izimbangela ngaphandle kolwazi kungenzeka futhi ukugcwaliseka ngokuthi lokho kwakusho, ikakhulukazi yonke izakhiwo idatha ukuthi bamele abantu begazi. Ukukhathazeka nalokho abantu bacabange futhi bazizwa kuyindaba yomuntu siqu ngokuphelele, yini okufanele yenziwe ukuqeda labangasebenzi, mal-emisebenzi, indlala, ububha, nokweswela futhi goading, Ephelelwe ithemba nokukhungatheka eholela ubugebengu kubaluleke kakhulu. Ukukhathazeka Public nalokho abantu bacabanga futhi bazizwa kuwuhlobo parasitism social and ngokomoya; labo amade yokucabanga kanye iziphetho ajulile futhi sihlakaniphe ayahlukunyezwa neziphetho okusheshayo witted kodwa enganembile ngokuthi lokho kwakusho Kwenziwa ngezindleko wonke umuntu. The akuhlakaniphile futhi mva esisekhona; iziphetho ezijulile futhi sihlakaniphe of abantu kokuba ngi- for bakwazi koda.
17) INhlangano yeziZwe kanye nohulumeni izozama ukuqeda yonke imikhawulo yomhlaba wonke futhi ukunciphisa isibalo izizwe kanye nezidingo for travel; imithetho yamazwe omhlaba ngeke kwaguqulwa ukuthi ukuvimbela ekudingiselweni isizwe imvelaphi; izihambi kumelwe aqhubeke esikhundleni sokuya emuva.
18) Lokhu kuzocaciswa ukuba wezempi futhi kubasebenzi ezamasosha ukuthi ukudluliselwa service angaphandle kusho ukuthi ababuyelanga zawo lendabuko; bangase yawoyise esizweni ukuthi abelwe noma siqhubekele indawo awakaze ngaphambili. Lesi senzo omunye uphela oluthile ubudemoni, ukuziqhenya zendawo, ukubenza abakho wedwa, ubuze imivuzo emhlabeni lapho umsebenzi omuhle ukuzibulala ngenxa yendlala, ukungondleki kanye nokungabikho kwemisebenzi ungakaze ngokusesilinganisweni kufezeke omhlaba. Yini kulingana bebahleka futhi goading ukuziphatha iyothathwa by zokuthutha ekhululeke kakhudlwana; Izinkinga zofuzo ezihambisana inbreeding abangu ngokwengxenye ixazululwe lolu hlobo inqubomgomo.
19) amalungelo Civil amacala abekwa phambili njalo by the state – sinqumo enkulu kucelwa ukuthi izinkampani eziye kuboniswe esephula amalungelo civil kuyoba ngaphansi kwegama elisha kanye nokuphathwa kanye kuncike Retro-asebenzayo class isinyathelo ngokumelene abanikazi, abaphathi kanye nabasebenzi .
20) Uma kunxusa ezisendalini zenziwa ezihilela ukunxephezela, uthembisa ukuba akhokhe kumele senziwe izihlobo / abangane ummangalelwa, futhi ezisendalini kunxusa ngeke bavunyelwe.
21) Trial by amajaji kuqinisekisiwe ngisho kulabo abangakwazi ukukhokhela ngokwakho; isimo angeke njalo cindezela abamangalelwa esicelweni ukuhlabana, ukwamukela necala esincishisiwe umele “benecala” futhi “akukho umncintiswano”, noma zidinga ukuba bathathe amakilasi ekuqondeni lwebulungisa bese ukucwaswa by examination yengqondo uma benqaba kunxusa ukuhlabana. Ilungelo izilingo speedy ngeke qiniseka, ngeke njengoba ilungelo uhlole ummangaleli enkantolo. Ukuzenzisa Ludicrous nomthetho enkantolo ukuziphatha wenza ngokuphelele okungadingekile uphinda izaphulamthetho kanye neziguli ngokwengqondo, futhi ekhuthaza yini kufana ekhaya futhi ibhizinisi sokuhlasela kanye ubudemoni engapheli. Ilungelo izilingo speedy kakhulu uzobe zigcinwe.
Kuyinto eside, eside isikhathi esidlule ukuthi abantu abaqapheli ukuthi izinkinga zabo zibangwa kakhulu ngokunembile izimo zomnotho nezenhlalo engenakwenzeka futhi yiziphi ngokunembile “Ingabe Yizenzo ZikaNkulunkulu futhi Angels” inikezwe izimo emhlabeni; imindeni kanye nomakhelwane ezibekwa ngokumelene nomunye zezenhlalo. Zonke amacala ukuthi ilethwa phambi abaseshi, amaphoyisa kumele kuqhutshekwe ziphenywe, futhi wabhekisela futhi idluliselwe esifundeni isilungisiwe alabo isikhalazo.
22) Ingxenye incazelo yalezi izinqubomgomo ukuthi ikhono konke okuye bengahlonishwa kusukela kwaqala isikhathi; Sikhuthaza lokho kufana uhlobo, nangozwela, kabusha, inkululeko, futhi ekutholeni izindawo ezikhiqiza kakhulu ngoba konke ukusebenza.
23) Njengengxenye yokuqeqeshwa for amaphoyisa, zokuqinisa, abameli, abahluleli, osopolitiki kanye nalabo akhethwe esikhundleni, balindeleke ukuba nesikhathi iziboshwa emajele, emajele futhi zabagula ngengqondo. Ngaphezu kwalokho, balindeleke ukuba ume sonke isikhathi ngaphandle kokudla, futhi ukusebenza kwabo ngalesi mfuneko zizokwenziwa umphakathi kakhulu, kuhlanganise nesikhathi bangakwazi ukuphatha ukuya ngaphandle kokudla, amanzi ume.
Akekho ehhovisi zomphakathi, kuzwelonke noma emhlabeni jikelele, uxolelwa le mfuneko. Incazelo yile mfuneko in ukuthi bonke abanikazi, abaphathi, abaphathi, omongameli, ondunankulu nalabo ehhovisi zomphakathi kudingeka sikhuthazelele leso izinhlawulo okubi kakhulu ukuthi izikhungo zabo kufanele anikele; bangaboni babe okuvota bame for them nor tando ukuvalelwa wedwa nje ukuba zabo zokuhlala kufanele zamukelwe. Amaphepha okuvota Kwezingelosi futhi abesaba uNkulunkulu bangase Ungemi ngabantu bangempela ekhona emhlabeni. Le nqubomgomo kusho futhi ukuthi labo babe abanikazi kube nezimenenja, abanezibambiso abayobe ezinkulu futhi abanikazi nazo ukukhuthaza emaphepheni kanye nezinye izizathu eziningi ngokuzithandela ukuba akhuthazelele lalibhekisela kakhulu emphakathini izinhlawulo oluyohlala; ukuzama ukuba siphile emgwaqweni futhi ezikhungweni nenhlalakahle yomphakathi futhi ahlinzeke izindaba nezithombe eziphathelene okuhlangenwe nakho jikelele.
Ingabe laba bantu ukuqonda ngempela kuphela izinhlawulo ukuthi sisingathwa, kodwa lungaba abantu ukuba ngempela izinguquko futhi babe ukuphila okungcono – Abantu nozwela ngempela futhi abanolwazi ngokwanele ukuba benze lutho ngaphezu sokufaka futhi imisebenzi engcono kanye emisebenzi, ukuqeqeshwa kanye nemfundo umbuzo wokuthi kokukhuthazelela izinhlawulo ngale ndlela izimpendulo.
24) Umbuso kumele sifune ukwenza more nombala ezimweni. AbaHluleli, abameli nezinkantolo babé izenzo isimiso lapho amatshwayo amadlingozi dress up udlalwa nokubi nasendleleni enezinkinga futhi “ababusi” ukuthi ungayeki verdicts engaguquki inhloso kanye uthathe ngempumelelo imfundo kanye nobufakazi akhawunti kanye nesenzo on the izixwayiso nokukhathazeka kokubili izisulu nomsolwa.
Abamangalelwa angeke bavinjelwe ukukhuluma; bangase abazange bathule. Ukwenza ukuphikisa ngamazwi nangezenzo ngokubhala isizathu esicacile ukuze kuqhutshwe uphenyo. The vehemence kokuphikisana isizathu uphenyo kungakhathaliseki abasolwa – iphutha kuyinto ohlangothini isimo ukwenza izindlela ezemfundo kanye nezinye futhi izindlu kanye namathuba atholakalayo, kanye uphenyo anda ubudlelwano nalabo abathintekayo, ngisho noma ngokuqondile abathintekayo nabamangalelwa nalabo bamangalela. The pridelessness of ukuphikisa, kanye nalokho kufana goading, sadism, nokugconwa force okungadingekile kubhekwa futhi.
25) Local, isimo, kazwelonke, ukuvota international futhi global izokwenyuka ngokushesha futhi singanqikazi wonke kanye nangowodwa, futhi zokuvota Internet.
Inhloso yalesi ukuvota futhi impendulo bayogcina kusho ukuthi abantu bavote kulokho uhlobo izimpahla kanye nezinsizakalo kuzokwenza kube kugqugquzelwa; emi amakhompyutha omphakathi kuzokwenziwa njalo etholakalayo ukuvota, kanye zokuvota kanye namanye amalungelo ngeke aphucwe ngezizathu lobugebengu. Ukwandisa amazinga, malula futsi izicelo ukukhangisa, kanye into okwandisa izinga nokuphepha yonke imikhiqizo kanye inkimbinkimbi kophawu kuyoba inhloso.
26) Utshwala, izibhamu, ugwayi, insangu, uphethiloli kanye ahlobene umkhiqizo intela izokwenyuka ukukhokhela lezi imizamo; inhloso zokukhiqiza bayogcina kube ukukhiqiza kweliphezulu izimpahla izinga nemisebenzi for bonke ngaphandle amanani ukuze abantu bakhethe zokuphila ezingcono futhi lezi zenziwa lula ukuba siwufinyelele. Ukwenyuka ukusebenza social and umvuzo ongokomoya kuyoba izisusa entsha ezweni lapho into kuyoba ukukhiqiza Izinga eliphakeme futhi umhlabeleli izimpahla yonke.
The energy nokuzimisela ukuthi okungena umlutha futhi kukhathazeka, umkhuba futhi iqoqo uzobe ibuyiselwa kalula futhi ngokukhalipha zibe nezinsiza ezingcono namathuba ugqozi wonke umhlaba ube ngcono ekholisayo. Kuyinto njalo kucatshangwa ukuthi zonke ingozi okuthiwa, zonke hlobo lokuziphatha enezinkinga eqinisweni ucingo ukuze umphakathi ongcono, izifo zamehlo zofuzo ubugebengu kanye umlutha. Zamehlo Genetic, isibonelo, kukhona ucingo ukukhulula zokuhamba zomphakathi kanye zokuhlala kanye nezimvubu abantu bezizinda ezihlukahlukene umndeni.
27) Inhloso yalezi, isimo, wesifundazwe, kuzwelonke, izinqubomgomo omhlaba kanye global zendawo nemihlomulo wukuhlinzeka imfundo enokuthula, zomthetho futhi wentando yeningi ukwandisa sokuphila futhi uqede zonke yendlala, ukungondleki, indlala, ukuntuleka kwemisebenzi, isifo, buphuya, bugebengu , ubuphekula nempi; lokhu kusho ukuthi thina lokuzama cishe ugqozi izwe ngaphandle inkokhelo, imali, ububha kanye impi. Ngakho kusukela omunye ngombono zenkolo lokhu kufana ekuqedeni “impande yesono”, imali; kusukela komunye umbono ongokomoya kube kufana singachithi isikhathi, isinyathelo, inhliziyo, umphefumulo nomoya ngohlamvu, ukheshi, ikhadi and computer ukuhlonza; kusukela nombono nezomnotho lilingana kokuba umphakathi ukhulile okukuyo abantu izimali wazuza in accounting kanye izithombe.
28) ngamaholide New izokwakhiwa ezihilela ukuzila, emi alungisa, emi nogada, fruitarianism, veganism futhi umphakathi lokubhala imincintiswano. Ezweni kangcono kakhulu, kuba ilungelo singadlile, emi alungisa futhi sidabuke futhi nokongiwa, kabusha futhi emisebenzi engcono kanye namahlamvu okwandayo ukuphiliswa nokudluliswa ukuthi wenza imiphakathi yizicukuthwane more and sihlakaniphe jikelele.
Lezi izoba izithombe, izindaba agency kanye labezindaba of emi izingalo okusezingeni ngaphezu kwekhanda, bemi ubusuku bonke, futhi ukuqashelwa social labo agweme ukudla futhi usebenzisa imithombo. Sifuna ngamaholide asho sidabuke, ekhetha ukuba nidede kwabaningi izizathu, ngobungcwele womuntu, kanye irekhodi siqu noma yaseningini ukudla sengathi kwakunjalo udumo, umphakathi kanye ngezemidlalo.
29) Stores kuzosikhuthaza ukuba baphathe imikhiqizo eziyisisekelo for free, futhi imikhiqizo bayanda kuzotholakala ngaphandle kwenkokhiso unikezwa kahulumeni, ukuphathwa nokusekela yangasese. Abantu abaye kusobala lidlule iphuzu lapho accounting kanye nezinqubo kufanele itsatfwe ukuqeqeshwa cross, uzazi kahle yonke inqubo production nokuphathwa anda umthwalo womuntu nokuqonda ngaphandle kokuchitha isikhathi imithombo, umoya kanye omsebenzi kanye namafomu kanye accounting.
30) Buildings izindlu zomphakathi uzobe zinabantu futhi kwakhiwe computer yomphakathi (and computer futhi izikhungo zomphakathi ukuthi abantu angasebenzisa imi, kuhlanganise zokudlela) etholakalayo abahlali ukuze wonke amasevisi, njengoba kuthanda imitapo futhi ukwanda zomphakathi ekuhlinzekeni zonke ongazicabanga uhlobo lokunakekelwa. An Inhloso: ukunciphisa isidingo okuphindaphindiwe travel zendawo ukuze imisebenzi, ukunakekelwa kwezokwelashwa, izindlu ukusesha, ukudla, izingubo kanye nokunciphisa ukusetshenziswa zokubasa kanye ukwandisa nesihawu, ngobulula, humanity futhi kalula inkonzo; isimo futhi isizwe ukuthenga futhi asebenzise izakhiwo ezingenalutho for kwezingu nje kuphela kuze konke ukungabi nakhaya siqedwa – kuze kukhona ngomumo umthamo ngokweqile in yonke imizi wezifiki. Imikhakha amadolobha imiswe evumela abantu imikhuba ezahlukene, hhayi nje izinkolo, ukuba badle mikhuba ngokukhululekile futhi ngaphandle kwesibopho zomthetho.
Qaphela: Uma ume for zonke lezi zinqubomgomo, empeleni ami isilungisiwe. Ingxenye yikho okuphefumulela ukusebenza ngempumelelo kwezinhlelo zokuxhasa siqu, isimo, kazwelonke kanye nenqubomgomo global is nje singakhathazeki euphemistic mayelana emi alungisa, hhayi kuphela emi alungisa ideologically, kodwa empeleni ngokomzimba emi alungisa isikhathi eside ngangokunokwenzeka KANYE ukufundisa futhi popularizing njengoba kahle futhi ngokushesha njengoba kungenzeka. Omunye Kulindeleke ukuthi abantu futhi wokukhangisa eyithumela amandla abo ukuze juqu izibonelo inqubomgomo kazwelonke kanye nemiphakathi yomhlaba ezenza ngempela umehluko. Lokhu kusho ukuthi ungase ngokushesha thatha lo mbhalo njengoba ngokwakho zonke izinhloso, futhi bakhululekile ukuba azakhele kimi futhi anezele nezinqubomgomo ukuthi ukwazi.
→ Danish world administration: Verden Sagsbehandler: økonomiske, militære, beskæftigelsespolitik – Ending Sult, fattigdom, kriminalitet, terrorisme og All Wars – tjene en A for titusinder af år – Med 30 Multivariable Solutions
← Swahili world administration: Dunia Msimamizi: Uchumi, Jeshi, Sera ya Ajira – Ending Njaa, Umaskini, Uhalifu, Ugaidi na wote vita – Kupata A kwa Makumi ya Maelfu ya Miaka